Samsung ကျင်းပသွားတော့မယ့် Galaxy Unpack Event မှာ ဘာတွေမြင်တွေ့ရမလဲ
9 Aug 2018 . 12:45 PM
Samsung စမတ်ဖုန်း ထုတ်ကုန်သစ် မိတ်ဆက်ပွဲကြီး မကြာခင် New York မြို့မှာ ကျင်းပသွားတော့မှာပါ။ Galaxy Unpack Event ဆိုတော့ ဒီပွဲလေးမှာ ကျွန်တော်တို့ ဘာတွေ မြင်တွေ့ရမလဲ၊ အခုအချိန် Samsung Product အသစ်ထဲမှာ ရေပန်းစားနေတာက Galaxy Note9ဖြစ်ပြီး သူနဲ့အတူ Galaxy Watch အသစ်နဲ့ Wireless Charge Duo ထုတ်ကုန် နှစ်မျိုး မိတ်ဆက်သွားဖွယ်ရှိတယ်လို့ သတင်းထွက်နေပါတယ်။
Galaxy Unpack Event
ဒါဆိုရင် Samsung Product မိတ်ဆက်ပွဲနဲ့အတူ ည ၉ နာရီခွဲမှာ ကျင်းပသွားတော့မယ့် Galaxy Unpack Event ကို ဘယ်လိုကြည့်ကျမလဲ။ ဒီပွဲစဉ်ကို Samsung Facebook Page မှာ တိုက်ရိုက်ကြည့်ရှုနိုင်သလို Samsung Website မှာလည်း သွားရောက်ကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်။ ဆိုတော့ Galaxy ထုတ်ကုန် မိတ်ဆက်ပွဲလေးမှာ ဘာတွေ ထူးခြားလာဦးမလဲ?
Galaxy Note perhaps?
Samsung ကိုယ်တိုင်က Galaxy S9 ရောင်းအားကျနေလို့ အားတက်သရော မျှော်လင့်ထားတဲ့ စမတ်ဖုန်းလို့ ပြောရင် မှားမယ်မထင်ပါဘူး။ ဒီဇိုင်းပိုင်းမှာ အရင် Galaxy Note 8 မော်ဒယ်နဲ့ ထူးခြားသွားတာမျိုးမရှိပေမယ့် Battery အနေနဲ့ 4,000 mAh Battery သုံးလာနိုင်ပါတယ်။
Different Colours, Yellowish Stylus Pen
ကင်မရာပိုင်းပြောရရင် Galaxy S9 Plus လို Dual Camera Setup ပါဝင်လာနိုင်ပြီး Aperture f/1.5 ကနေ f/2.4 အထိ အတိုးချဲ့ပြုလုပ်နိုင်တဲ့ 12MP ပင်မကင်မရာ၊ ထပ်ပြီး Aperture f/2.4 ရှိတဲ့ 12MP ကင်မရာကိုပဲ Secondary အနေနဲ့ ပါဝင်လာမယ်လို့ ခန့်မှန်းရပါတယ်။ ရှေ့ကင်မရာမှာတော့ 8MP ကင်မရာပဲ သုံးထားနိုင်ပြီး Wide-angel Lens ထည့်သွင်းထားမယ်လို့ သိရပါတယ်။ ဒီနေရာမှာ Galaxy S9 Plus နဲ့ ကွာသွားမယ့်အချက်က 960fps ဗီဒီယိုတွေကို ဝ.၄ စက္ကန့်အထိ ရိုက်ကူးနိုင်မယ်ဆိုတာပါ။ အရင်တုန်းက ဝ.၂ စက္ကန့်ထိပဲ ရိုက်လို့ရတာဆိုတော့ ၁၂ စက္ကန့်စာ Slow-motion ဗီဒီယိုတွေ Galaxy Note9နဲ့ ရိုက်ကူးလို့ရမယ်လို့ ခန့်မှန်းရပါတယ်။
Stylus Pen Feature
Galaxy Note9မှာ ထူးခြားလာမယ့် နောက်တချက်က Storage ကို 512GB အထိ ပါဝင်လာမယ်ဆိုတဲ့ သတင်းပါ။ မကြာသေးခင်က ပေါက်ကြားခဲ့တဲ့ သတင်းအရဆိုရင် Galaxy Note 8 လို 6.4″ Display၊ Quad HD+ Resolution နဲ့ Corning Glass Protection တွေ ပါဝင်လာမှာပါ။ ကျန်တဲ့ Specification နဲ့ ပတ်သက်လို့ တိတိကျကျ မသိရသေးမယ့် Snapdragon 845 SoC ဒါမှမဟုတ် Samsung Exynos9Series Processor သုံးထားနိုင်ပါတယ်။ RAM ကို 6GB ဒါမှမဟုတ် 8GB ပါဝင်လာနိုင်ပြီး Storage ကို 64GB/128GB/512GB ဆိုပြီး ရွေးချယ်လို့ရမယ် ထင်ပါတယ်။
Leaked Galaxy Note9Image
ဒီလိုဆိုတော့ Galaxy Note9နဲ့ ပတ်သက်လို့ အတော်လေး ပြည့်စုံနေပြီထင်ပါတယ်။ ထုံးစံအတိုင်း IP68 Standard နဲ့ ပွဲထွက်လာဦးမှာဖြစ်သလို Audio ပိုင်းမှာလည်း Dolby Atmos နဲ့ အားဖြည့်ထားတဲ့ Stereo Speaker အသံထွက်စနစ် ပါဝင်လာဦးမှာပါ။
Wireless Charger Duo နဲ့ ပတ်သက်လို့ Roland Quandt ဆိုသူက Twitter အကောင့်မှာ ပုံနဲ့တကွ တင်ထားခဲ့လို့ Samsung တိတ်တဆိတ် မိတ်ဆက်ပေးသွားချင်တယ်ဆိုတာ သိရတာပါ။ သူလေးလည်း Apple AirPower Mat လို 2-in-1 Wireless Charging စနစ်ပါဝင်လာပြီး စမတ်ဖုန်းနဲ့ နာရီကို တပြိုင်နက် အားသွင်းနိုင်မှာ ဖြစ်တယ်လို့ သိရပါတယ်။
Galaxy Gear ကိုတော့ Google သုံးနေတဲ့ Wear OS အစား Samsung ကိုယ်ပိုင် Tizen Software ပဲ သုံးထားမယ်လို့ ခန့်မှန်းရပါတယ်။ လက်ရှိအချိန်မှာ Galaxy Gear နဲ့ ပတ်သက်လို့ တိတိကျကျ မသိရသေးတာမလို့ မကြာခင် ကျင်းပသွားတော့မယ့် Galaxy Unpack Event ရောက်မှသာ Device ၃ မျိုးလုံး ဘယ်လို Specification မျိုးနဲ့ မိတ်ဆက်လာမလဲဆိုတာ အသေးစိတ်သိရှိရမှာပါ။
Samsung ကငျြးပသှားတော့မယျ့ Galaxy Unpack Event မှာ ဘာတှမွေငျတှရေ့မလဲ
Samsung စမတျဖုနျး ထုတျကုနျသဈ မိတျဆကျပှဲကွီး မကွာခငျ New York မွို့မှာ ကငျြးပသှားတော့မှာပါ။ Galaxy Unpack Event ဆိုတော့ ဒီပှဲလေးမှာ ကြှနျတျောတို့ ဘာတှေ မွငျတှရေ့မလဲ၊ အခုအခြိနျ Samsung Product အသဈထဲမှာ ရပေနျးစားနတောက Galaxy Note9ဖွဈပွီး သူနဲ့အတူ Galaxy Watch အသဈနဲ့ Wireless Charge Duo ထုတျကုနျ နှဈမြိုး မိတျဆကျသှားဖှယျရှိတယျလို့ သတငျးထှကျနပေါတယျ။
ဒါဆိုရငျ Samsung Product မိတျဆကျပှဲနဲ့အတူ ည ၉ နာရီခှဲမှာ ကငျြးပသှားတော့မယျ့ Galaxy Unpack Event ကို ဘယျလိုကွညျ့ကမြလဲ။ ဒီပှဲစဉျကို Samsung Facebook Page မှာ တိုကျရိုကျကွညျ့ရှုနိုငျသလို Samsung Website မှာလညျး သှားရောကျကွညျ့ရှုနိုငျပါတယျ။ ဆိုတော့ Galaxy ထုတျကုနျ မိတျဆကျပှဲလေးမှာ ဘာတှေ ထူးခွားလာဦးမလဲ?
Samsung ကိုယျတိုငျက Galaxy S9 ရောငျးအားကနြလေို့ အားတကျသရော မြှျောလငျ့ထားတဲ့ စမတျဖုနျးလို့ ပွောရငျ မှားမယျမထငျပါဘူး။ ဒီဇိုငျးပိုငျးမှာ အရငျ Galaxy Note 8 မျောဒယျနဲ့ ထူးခွားသှားတာမြိုးမရှိပမေယျ့ Battery အနနေဲ့ 4,000 mAh Battery သုံးလာနိုငျပါတယျ။
ကငျမရာပိုငျးပွောရရငျ Galaxy S9 Plus လို Dual Camera Setup ပါဝငျလာနိုငျပွီး Aperture f/1.5 ကနေ f/2.4 အထိ အတိုးခြဲ့ပွုလုပျနိုငျတဲ့ 12MP ပငျမကငျမရာ၊ ထပျပွီး Aperture f/2.4 ရှိတဲ့ 12MP ကငျမရာကိုပဲ Secondary အနနေဲ့ ပါဝငျလာမယျလို့ ခနျ့မှနျးရပါတယျ။ ရှကေ့ငျမရာမှာတော့ 8MP ကငျမရာပဲ သုံးထားနိုငျပွီး Wide-angel Lens ထညျ့သှငျးထားမယျလို့ သိရပါတယျ။ ဒီနရောမှာ Galaxy S9 Plus နဲ့ ကှာသှားမယျ့အခကျြက 960fps ဗီဒီယိုတှကေို ဝ.၄ စက်ကနျ့အထိ ရိုကျကူးနိုငျမယျဆိုတာပါ။ အရငျတုနျးက ဝ.၂ စက်ကနျ့ထိပဲ ရိုကျလို့ရတာဆိုတော့ ၁၂ စက်ကနျ့စာ Slow-motion ဗီဒီယိုတှေ Galaxy Note9နဲ့ ရိုကျကူးလို့ရမယျလို့ ခနျ့မှနျးရပါတယျ။
Galaxy Note9မှာ ထူးခွားလာမယျ့ နောကျတခကျြက Storage ကို 512GB အထိ ပါဝငျလာမယျဆိုတဲ့ သတငျးပါ။ မကွာသေးခငျက ပေါကျကွားခဲ့တဲ့ သတငျးအရဆိုရငျ Galaxy Note 8 လို 6.4″ Display၊ Quad HD+ Resolution နဲ့ Corning Glass Protection တှေ ပါဝငျလာမှာပါ။ ကနျြတဲ့ Specification နဲ့ ပတျသကျလို့ တိတိကကြ မသိရသေးမယျ့ Snapdragon 845 SoC ဒါမှမဟုတျ Samsung Exynos9Series Processor သုံးထားနိုငျပါတယျ။ RAM ကို 6GB ဒါမှမဟုတျ 8GB ပါဝငျလာနိုငျပွီး Storage ကို 64GB/128GB/512GB ဆိုပွီး ရှေးခယျြလို့ရမယျ ထငျပါတယျ။
ဒီလိုဆိုတော့ Galaxy Note9နဲ့ ပတျသကျလို့ အတျောလေး ပွညျ့စုံနပွေီထငျပါတယျ။ ထုံးစံအတိုငျး IP68 Standard နဲ့ ပှဲထှကျလာဦးမှာဖွဈသလို Audio ပိုငျးမှာလညျး Dolby Atmos နဲ့ အားဖွညျ့ထားတဲ့ Stereo Speaker အသံထှကျစနဈ ပါဝငျလာဦးမှာပါ။
Wireless Charger Duo နဲ့ ပတျသကျလို့ Roland Quandt ဆိုသူက Twitter အကောငျ့မှာ ပုံနဲ့တကှ တငျထားခဲ့လို့ Samsung တိတျတဆိတျ မိတျဆကျပေးသှားခငျြတယျဆိုတာ သိရတာပါ။ သူလေးလညျး Apple AirPower Mat လို 2-in-1 Wireless Charging စနဈပါဝငျလာပွီး စမတျဖုနျးနဲ့ နာရီကို တပွိုငျနကျ အားသှငျးနိုငျမှာ ဖွဈတယျလို့ သိရပါတယျ။
Galaxy Gear ကိုတော့ Google သုံးနတေဲ့ Wear OS အစား Samsung ကိုယျပိုငျ Tizen Software ပဲ သုံးထားမယျလို့ ခနျ့မှနျးရပါတယျ။ လကျရှိအခြိနျမှာ Galaxy Gear နဲ့ ပတျသကျလို့ တိတိကကြ မသိရသေးတာမလို့ မကွာခငျ ကငျြးပသှားတော့မယျ့ Galaxy Unpack Event ရောကျမှသာ Device ၃ မြိုးလုံး ဘယျလို Specification မြိုးနဲ့ မိတျဆကျလာမလဲဆိုတာ အသေးစိတျသိရှိရမှာပါ။